७३.९ प्रतिशत जनता किसान रहेको देशमा पाँच महिनामै ३४ अर्बको खाद्य पदार्थ आयात | Tungoon
काठमाडौं । कृषि गणना २०६८ अनुसार नेपालमा ७३ दशमलव नौ प्रतिशत जनता कृषि कर्ममा संलग्न छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा चित्रण गर्दै सोहीअनुसारको व्यवहार गर्दै आएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै चामल, मकै, भटमास, स्याउ जस्ता खाद्य पदार्थको आयात रु ३४ अर्ब २१ करोड बराबरको भएको छ ।
कृषि पेशामा संलग्न हुनसक्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । स्वदेशमा नै रहेका युवा समेत शहरी तथा सुगम क्षेत्रमा रहँदा ग्रामीण तथा तराईका खेतीयोग्य जमीन बाँझो बन्दै गएको छ ।
आव २०७४–७५ मा मात्रै रु ७३ अर्ब १६ करोड बराबरको चामल, मकै, स्याउ, भटमास, आलु आयात भयो । चालू आवको पाँच महीनामा रु १३ अर्ब ५८ करोड बराबरको चामल आयात भयो । आव २०७४–७५ मा रु २९ अर्ब ५३ करोडको चामल आयात हुँदा आव २०७३–७४ मा रु २३ अर्ब ८७ करोडको आयात भएको थियो । मसिनो र बास्नादार चामलको माग बढ्दा चामलको आयात बढेको स्वयम् सरकारकै भनाइ छ ।
अर्को तथ्याङ्क पनि छ । नेपालका प्रमुख बालीमध्ये मकै एक हो तर चालू आवको पाँच महीनामा रु पाँच अर्ब १९ करोडको मकै आयात भयो । आव २०७४–७५ मा रु १२ अर्ब ५५ करोड र आव २०७३–७४ मा रु १० अर्ब ६३ करोडको मकै आयात भयो । हरेक वर्ष चामल र मकैको आयात बढिरहेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको ठूलो परिमाणको रकम खाद्यान्नको खरीदका लागि खर्च हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने चालू आवको पाँच महिनामा रु सात अर्ब पाँच करोडको भटमास आयात भएको छ । आव २०७४–७५ मा रु १८ अर्ब १५ करोड र आव २०७३–७४ मा रु १६ अर्ब ९७ करोड बराबरको भटमास र भटमासको तेल आयात भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार नेपालका करीब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरुले वार्षिक नेपालमा पठाएको ठूलो परिमाणको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७४–७५ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब छ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रु चार खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।
चालु आवको पाँच महिनामा मात्रै रु तीन अर्ब ९९ करोडको आलु आयात भएको छ । चिप्स प्रयोजनका लागि आलुको आयात बढिरहेको छ । नेपालमा चिप्सका लागि आलु खासै उत्पादन गरिँदैन । आव २०७४–७५ मा रु छ अर्ब ३५ करोड र आव २०७३–७४ मा रु पाँच अर्ब ५२ करोडको आलु आयात भएको छ ।
यस्तै चालु आवको पाँच महिनामा रु दुई अर्ब ५६ करोडको स्याउ आयात भएको छ । आव २०७४–७५ मा रु पाँच अर्ब ६३ करोड र आव २०७३–७४ मा रु चार अर्ब ८७ करोडको स्याउ आयात भएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार कृषिउपज आयात ठूलो मात्रामा भइरहेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले आयात किन बढ्यो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘जनसंख्यामा वृद्धि र मानिसको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै मसिना र बास्नादार चामलको माग बढ्दै गएकाले चामलको आयात बढ्दो देखिएको हो ।’
कुखुरा र पशुपंक्षी पाल्ने कृषकको संख्या बढेको भन्दै पशुपालन र पोल्ट्री व्यवसाय फष्टाउँदै गएको र त्यसका लागि आवश्यक दाना प्रयोजनका लागि विशेष गरी मकै र भटमासको पिना आयात अधिक रहेको छ । तरकारीतर्फ मुख्यगरी आलु र प्याजको अत्यधिक आयात देखिएको भएता पनि अन्य ताजा तरकारीको लगभग व्यापार सन्तुलनको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालका अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न १४ नयाँ कार्यक्रम शुरु गरिँदै छ । विसं २०७६ देखि २०८० सम्म ७७ वटै जिल्लामा युवा रोजगार विशेष कार्यक्रममार्फत रु पाँच अर्ब खर्च गरिनेछ ।
यस्तै किसान कल्याण प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रु ५० अर्ब, एक पालिका एक मोडल फार्म प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु २० अर्ब खर्च गरिनेछ । प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र १५ हजार ६० ले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नगदेबाली प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले कृषिको आत्मनिर्भर गर्ने अभियानअन्तर्गत उच्च मूल्य वस्तु उत्पादन शृङ्खला विकास कार्यक्रमकमा रु एक अर्ब, सिञ्चित क्षेत्र सघन धान उत्पादन कार्यक्रममा रु चार अर्ब पाँच करोड, कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा रु एक अर्ब खर्च गरिने भएको छ ।
Previousयौन सम्बन्धलाई कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने ?
Nextप्रहरीको खरीदमा ठेकेदारहरूको सेटिङ: गुणस्तर टेष्टमा फेरि मिलेमतो ?
रक्सी खाएर युएईमा चक्कु हानाहान, एक महिलाको ज्यान गयो
स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतः हरेक दिन सरुवाको निर्णय
स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरे कुलपतिको कार्यालय कब्जा गरिने